'Destination Florence': mpiara-miasa amin'ny Convention Convention sy Bureau Bureau miaraka amin'ny Qatar Airways ho an'ny hetsika Doha
Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » 'Destination Florence': mpiara-miasa amin'ny Convention Convention sy Bureau Bureau miaraka amin'ny Qatar Airways ho an'ny hetsika Doha
Oktobra 12, 2017
I Florence Convention and Visitors Bureau (FCVB) dia nanao atrikasa tany Doha ny 26 septambra lasa teo, niaraka tamin'ny Qatar Airways, niaraka tamin'ny fanohanan'ny Antenimieran'ny Varotra Italiana tao Qatar sy teo ambany fiahian'ny masoivoho italiana tany Qatar. Nandritra ny atrikasa, ny mpikambana ao amin'ny FCVB dia nanolotra ny tetikasany vaovao 'Destination Florence.'
'Destination Florence' dia tetikasa iray niaraha-niasa tamin'ny Fiaraha-miasa amin'ny Kaominin'i Florence izay hamaritana modely ho avy amin'ny fitantanana sy ny fitohizan'ny fizahan-tany any Florence, asa izay manana ny mety ho benchmark ho an'ny firenena iray manontolo. Ny tetikasa 'Destination Florence' dia misy fitaovana manan-danja sy stratejika koa amin'ny fampiroboroboana sy fivarotana ny tanànan'i Florence: ny vavahady www.destinationflorence.com, izay ho ivon-toerana nomerika an'ny fizahan-tany an'i Florence. Ity tranonkala tsy manam-paharoa ity dia hifantoka amin'ny fanomezana fomba mora ho an'ireo mpitsidika hahazo vaovao momba ny tanàna.
Qatar Airways dia nanangana serivisy isan'andro any Pisa tamin'ny volana aogositra 2016, mampifandray ireo mpandeha avy any Tuscany mankany amin'ny tamba-jotra Qatar Airways amin'ny alàlan'ny foibeny manandanja any Doha, ho any amin'ny orinasa sy fialamboly mihoatra ny 150. Ny fitakian'ny mpandeha sidina mankany sy avy any Italia dia nitombo be tato anatin'ny taona vitsivitsy, ary ny fanampiana an'i Pisa dia mameno ny toeran-telo misy ny zotram-piaramanidina any Italia: Roma, Milan ary Venice.
HE Pasquale Salzano, masoivoho italianina any Qatar, nandritra ny lahateniny ho an'ny atrikasa Firenze CB, dia nanantitrantitra ny fitomboan'ny fahalianan'ny mpizahatany Qatari any Florence ho toerana tian-dry zareo. Nanambara izy fa “Manodidina ny 30,000 ny mpizahatany avy any Qatar nitsidika an'i Italia tamin'ny 2016 ary i Florence no iray amin'ireo safidiny malaza indrindra. Miara-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka aminay ny tanjonay hampiakarana an'io isa io koa miankina amin'ny làlam-pifandraisana mivantana mivantana mankany Pisa notokanana tamin'ny taon-dasa. ”
Ny filoha lefitra Qatar Airways ara-barotra - Qatar, Martha Tilahun Paulos dia nilaza hoe: “Faly aho fa nanana fotoana nihaonana tamin'ny mpitantana orinasa italiana nandritra ity atrikasa fitsangatsanganana ity. Ny fangatahan'ny mpandeha mankany Pisa, vavahady farany mankany Italia, dia nitombo be tamin'ny taona lasa. I Italia dia tsena iray tena lehibe ho antsika, ary miasa sidina 42 isan-kerinandro ho any Italia izahay izao, miaraka amin'ireo fiaramanidina farany, anisan'izany ny Dreamliner Boeing 787. ”
Sampan-draharaha misahana ny fizahan-tany 80 mahery sy mpikirakira fizahan-tany no nandray anjara tamin'ny atrikasa, izay fahombiazana lehibe teo amin'ny lafiny fitomboan'ny fahalianany tao Florence sy ny fanasongadinana ireo fahafaha-manao asa maro natolotry ny toerana haleha.
Mba hanolorana ny tsara indrindra any Florence, ny FCVB dia nanasa ny sasany amin'ireo mpikambana ao aminy hanatrika io atrikasa io, ao anatin'izany ny Affresco Events Group, Hotel Il Salviatino, Hotel Portrait Firenze della Lungarno Collection Hotels, SINA Hotels, The Mall - fivarotana lafo vidy ary Toscana Aeroporti.
FCVB dia nandamina programa feno natokana ho an'ny tsena arabo: tamin'ny 2016 FCVB dia tany Dubai mba hanolotra ny MICE sy ny vokatra fialamboly ho an'ny mpihaino mpizahatany, DMC ary PCO izay manam-pahaizana manokana amin'ny hetsika sy fitsangatsanganana mahafinaritra any UAE. Ny talen'ny FCVB, Carlotta Ferrari dia nilaza hoe: "Tianay ny hampitombo ny asanay mankany amin'ny tsena arabo satria azonay antoka fa miankina amin'ny drafitra fampiroboroboany ny fahombiazan'ny toerana iray. Raha ny marina dia fanintelony izao eto Arabia izahay ary ho any Dubai ihany koa izahay amin'ny tsenambarotra ATM amin'ny volana aprily 2018. ”